Falanqaynta TDFH (SWOT Analysis) ||Tukesomalism.com | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxaad Ka Ogtahay Awooddii Cusmaaniyiinta Qaybtii 2aad?
Ayaanle Cabdi, March 20, 2016
Miski Cabdinuur Salal, May 3, 2019
BBC Somali, September 8, 2018
Sidee Afrika u Horumari Kartaa?
Maxamed Cabdirisaaq Diriye, February 7, 2019
Aqoon iyo Afkaar
Ismaaciil Ibraahim Hassan, May 12, 2019
8 Qodob Ee Kaa Caawin Karta Maareeynta Xanaaqaada.
Miski Cabdinuur Salal, July 26, 2019
Dhaqaalaha iyo SiyaasaddakoorsooyinkaMaqal & MuuqaalXirfadaha & Teknolojiyada
Falanqaynta TDFH (SWOT Analysis) ||Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed — February 12, 2016
TDFH waxay u taagantahay T=Waxyaabaha Taabbagalay, D=daciifnimo, F=Fursadaha iyo H=Hanjabaada. Xisaabta waxaa loo isticmaalaa in wax lagu xisaabiyo, waxay leedahay qaacidooyin loo maro markii la isticmaalayo xisaabta noocyadeeda kalle duwan. TDFH waa nimaan ay isticmaalaan ururada haddii ay tahay shirkadaha ganacsiga iyo haayadaha noocyadooda kalle duwan. Xarfaha aan soo gaabiyay TDFH waxay u taaganyihiin sidda xarfaha ingariiska oo kalle (SWOT). Marwalbo waa muhiim in dadkeena waxwalbo afkooda hooyo ku fahmaan si loo helo bulsho leh Afkaar wanaagsan.
TDFH- waa qaacido loo maro sidda lagu ogaani karo mustaqbalka shirkadaas. Waa nidaam ay isticmaalaan kooxda maamulka shirkada, iyagoo ku cadeeynaya gudaha iyo dibadda shirkada oo saameyn ku yeelani doona qaabka ama hamdhiska mustaqbalka shirkada.
Falanqaynta TDFH waxaa loo sameeyay oo qayb ka ah geedi socodka qorshaynta guud ee shirkadaha taas oo hadaf maaliyadeed iyo mid hawlgal lagu wadaa sannadka soo socda iyo xeelado loo abuuray si ay u dhamaystiraan hadafyada shirkada. TDFH waxay leedahay 4 qeyb labada qeyb ee ugu horeyso T=Waxyaabaha Taabbagalay, D=daciifnimo- waxaa loo isticmaalaa wixii ka qabsoomay gudaha shirkada. Tusaalle ahaan,
T=Waxyaabaha Taabbagalay waxay tilmaamtaa taabayaasha sifooyinka wanaagsan, markaad wax badan rabto inaad ka ogaato waxaa loo baahanyahay inaad isweydiiyo su’aalooyin dhowr ah sidda:
Maxay ku fiicantahay shirkada?
Maxay tahay illaha (resources) aan ku haysano gudaha shirkada
Su’aalooyinkaan jawaabahooda waxay noqoni karaan sidda: Sifooyinka wanaagsan ee dadka, sidda aqoonta, aqoonsiga, shabakada (network), sumcad, ama xirfadaha. Hantida dhabta ah ee shirkadda, sidda caasimada iyo meelaha ay ka howl gasho, credit, macaamiisha hadda jira iyo qaybinta allaabaha shirkada, shatiyada, ama technologyada horumarsan IWM.
Waxaa kalle muhiim ah inaad isweydiiyo: Waa maxay faa’iidooyinka aad haysato haddii ay noqoto inaad la tartami karto shirkadaha kalle ama aad yeelani karto awoodda suuqa?
Ma leedahay awoodda cilmi-baarista iyo horumarinta fikirka guud ee shirkadaada? Sidda Xarumaha Warshadaha?
Kobaca ganacsigaada marwalbo wuxuu u baahanyahay inaad raadiso fursadaha cusub iyo macaamiilka cusub ee imaan karo suuqa. Markaad raadinayso fursadaha kobaca ganacsigaada waxaad u baahantahay inaad horumariso nidaamka ganacsigaada sidda habka aad macaamiilka u gaarsiiyo allaabtaada, horumarinta qeybaha cusub ee allaabta iyo adeegyada iyo ballaarinta juqraafi ahaan. Kooxda maamulka shirkada waxaa loo baahanyahay inay si fiican u falanqeeyaan TDFH-ka.
D=daciifnimo –waa qeybta labaad TDFH-ka waxay timaamtaa daciifnimada ka jirto gudaha shirkada. Qeybtaan waxaa loo baahanyahay in si gaar ah loo horumariyo, sawabtoo ah waa halka shirkada ay ka liidato. Waxaana muhiimsan in qorsho cad loo sameeyo si ay shirkada ulla sii tartami karto shirkadaha kalle oo la midka ah. Si loo xaliyo daciifnimadaas ka jirta shirkada waxaa loo baahanyahay in la isweydiiyo su’aalahaa:
Waa maxay meelaha u baahan horumar, si shirkada u gaarto ujeedooyinka tartanka adag?
Ganacsigaaga ma leeyahay khayraadka kooban?
Muxuu la’yahay ganacsiga shirkada, tusaalle ahaan markii loo fiiriyo shaqaalaha shirkada, sidda khibrad ama inay helaan xirfado ama technology?
Ganacsigaada meel xun miyuu ku yaalaa?
F=Fursadaha –qeybtaan waa qeyb ka baxsan gudaha shirkada. Labadii qayb ee aan soo sheeknay T=Waxyaabaha Taabbagalay iyo D=daciifnimo waxay quseeyaan gudaha shirkada. Labada qeyb ee ugu dambeysa F=Fursadaha iyo H=Hanjabaada waxay diirasada saarayaan waxa ka jiro binaanka shirkada.
Sidda ay u kalla aragti dheer yihiin shirkadaha ayay u kalla ogyihiin fursadaha ka jira suuqa iyo meelaha kalle ee u baahan in laga howlgalo. Si loo helo aragtiyo wanaagsan waxaa wanaagsan in la isweydiiyo su’aalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin:
Waa maxay fursadaha ka jirra suuqa ama deegaanka oo aad faa’iidaysan kartaan?
Waa sidee aragtida ganacsigaaga?
Sidee waqtigaada u illaalini kartaa si aad ugu faa’ideysato fursadaha?
H=Hanjabaada –waa qeybta ugu dambeysa waxayna ka mid tahay qeybta labaad ee ka baxsan gudaha shirkada. Hanjabadaan ayaa noqoni karto noocyo badan aad waxbo ka qabani Karin mar-marka qaar, balse waxaa loo baahanyahay ayaa ah in xittaa la soo dhaweeyo in lalla yimaado wax ka qabadka arrintaan. Waxaana marwalbo muhiim ah in la isweydiiyo su’aalooyin ay ku dheehantahay maskixiyan:
Yaa ku jira tartanka hadda jira ama ka iman kara?
Waa maxay waxyaabaha ka baxsan gacantaada oo ganacsiga khatar ugu jira?
Ma jiraan duruufo adag ay abuureen arrimuha ay wadaan ama horumarinta keeni kara in ay ka sii daraysaa dakhliga ama faa’iidada?
Maxay tahay hanjabaada ka imaani karto dadaallada suuqa?
Ma laga yaabaa in hanjabaad timaado oo ku saabsan sicirka suuqa?
Muxuu noqoni karaa isbedelka dhaqanka macaamiisha, dhaqaalaha, ama xeerka dawlada in hoos u dhigis lagu sameeyo iibka suuqa?
Wax soo saarka cusub ama technologyada la soo bandhigay ka dhigayaa mid, qalabka, ama adeegyada huriye?
Marka aad ogaato iyo mudnaanta natiijada TDFH (SWOT), waxaad u isticmaali kartaa in aad dhisatid xeelado muddada gaaban iyo muddada-dheer ee ganacsigaaga. Qiimaha dhabta ah ee layligan waa in la isticmaalayo natiijada si loo kordhiyo saamayn wanaagsan ku yeelanayaan, ganacsiga iyo in la yareeyo qatarta soo wajihi karto shirkada.
Qaacidooyinkaas 4ta ah, T=Waxyaabaha Taabbagalay, D=daciifnimo, F=Fursadaha iyo H=Hanjabaada, waa aragtida guud ee aad ku ogaani karto heerka ay marayso shaqada shirkada iyo waxa laga filani karo inay isku bedesho shirkadaas. Sidda aan wada ogsoonahay shirkadaha waxay u kalla xoog badan yihiin sidda ay ugu kalla wax soo saar badan yihiin.
Habkaan haddii aad isticmaasho waxaad la imaani kartaa xeelado iyo tayo cusub oo aad wax kaga bedeli karto daciifnimada markii horre ku qabsatay.
Next post Muran ka dhashay Facebook ||Tukesomalism.com
Previous post The Best Place for a Small Business to Invest Marketing ||Tukesomalism.com